Khadro Carab: Ninkayga kuma hayo raq iyo ruuxba, qaraxii…. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Khadro Carab: Ninkayga kuma hayo raq iyo ruuxba, qaraxii….
Khadro Carab: Ninkayga kuma hayo raq iyo ruuxba, qaraxii….
Muqdisho(SONNA)-Khadra Carab Cabdi, 27 sano jir haybineysa seygeeda oo uga war dambeysay labadii duhurnimo maalintii Sabtiga ee uu dhacay qaraxii ka dhacay isgoyska Zope ee magaalada Muqdisho halkaas oo ku dhawaad 300 ruux ay ku naf waysay halka in ka badan tiradaasna ay ku dhaawacantay.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo ku baaqey in loomidoobo difaaca dalka iyo shacabka
Next articleRa’iisul Wasaare Khayre oo ka tacsiyeeyey geeridii Xildhibaan Bootaan Ciise Caalin